Ny fitsidihan’ny prezida Bush any Isiraely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2008 15:34 GMT
Vakio amin'ny teny Português, عربي, বাংলা, English
Olmert, Bush, ary Abbas nandritra ny fikaonandoham-pandriampahalemana tao Annapolis tamin’ny Novambra 2007 at the Annapolis Peace Summit. Saryavy amin’ny United States Department of State.
Tonga tao Isiraely androany (alarobia) ny filoha Amerikana George W. Bush ary tamin’ity indray mitoraka ity dia nanan-kambara ny Isiraeliana mpiteny anglisy. Fomba fijery avy hatrany navoakan’ny roa tonta:
• Fitarainana fa manelingelina ny andavanandrom-piainan’ny mponina ao Jerosalema ny fanamafisana ho faratampony ny fitandroana ny fandriampahalemana
• Mikasika ny bala afomanga vaovao nalefa avy ao Libanona sy ny fanafihana avy any Gaza hiarahabana ny fitsidihan’i Bush
Ny tanjon’ny filoha Bush nandritra ny roa andro nandalovany dia ny hitarika sy handrisika ny resaka ho amin’ny fandriampahalemana eo amin’ny governemanta Isiraeliana sy ny Fahefana Palestiniana mba hananganana ny firenena Palestiniana amin’ny taona 2008. Hihaona amin’ny filoha Palestiniana Mahmoud Abbas moa izy mandritra ny fitsidihany any Isiraely ary avy eo dia hihaona amin’ny Praiminisitra Isiraeliana Ehud Olmert.
Efa tamin’ny taona 1998 ny fitsidihana farany nataon’ny Prezidà Bush talohakelin’ny fe-potoam-piasany voalohany ho filoham-pirenena.
Fandaniana tsy mampino hatramin’ny $25,000 isan’ora eo amin’ny fiarovana eo amin’Isiraely sy fanakatonana ny lalambe rehetra mandritra ny roa andro no tetibidin’ity fandalovana ity.
Nihiakam-pahatairana i Rooftopper Rav ao amin’ny Jewschool :
“Tahaka ny manaonao foana. Notazon’ity firenena ity tsy hianatra nandritra ny roa volana ny mpianatra satria nihenahena tsy handoa karama mahavelona ny mpampianatra izy, ary mbola mandà hanakarama ireo mpampianatra (mpikaroka) ireo araka izay sahaza azy, moa tsy efa nampanantena (niomana) fatratra zavatra tsara ho an’ny tetibola sy ny fialana avy any Gaza, nefa dia mbola mamela ny mahantra, ny zokiolona ary ny sisa velona tamin’ny fandripahana jiosy ao aminy halazo amin’ny tsy fananam-bola sy tsy mahazo ny fikarakarana ara-pahasalamana tokony ho azy ihany. Nefa eto dia ampy ny vola hanaovana fandaniana $25 000 isan’ora ho an’i George Bush.”
Ao amin’ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Eo ampiandrasana an’i George” i Gideon Lichfield ao amin’ny Fugitive Peace no mamoaka ny heviny:
“Efa very sasaka noho ny mahazatra ny halakim-pifamoivoizana eto Jerosalema. Mihaohaody manerana an’i Jerosalema sy Ramallah ny miaramila arifomba. Be fitaovam-piadiana be ny manodidina noho ny any amin’ny fiaraha-mientana NRA [National Rifle Association]. Midify ny hifamotoana ny olona mandritra ny roa andro…aleo manao izay.”
Manampy ny resaka i Efratti ao amin’ny From Nation's Capital to Nation's Capital:
“Tsy afa-mihetsika tanteraka ny tanàna. Eto amin’ny manodidina avokoa ny polisim-pifamoivoizana, ny zandarin-dalam-pirenena ary ny samapana hafa amin’ny fiarovana (filaminana). Enga anie mba tsy hisy herisetra mpitranga andavanandro na lozam-pifamoivoizana nila ny fanaraha-mason’ny polisy; fa dia ho sendra ny vintan-dratsiny tanteraka izay tra-doza eo.”
Eliesheva ao amin’ny Lizrael no manontany:
“Maninona moa raha nanomana fihaonam-be ho an’ny mpitondra eto amin’ny faritra Azia andrefana? Mino aho fa raha amin’ny fihaonan’ny governemanta amerikana sy Isiraeliana dia (misy olona afaka mahaloa) web cams (fakantsarimihetsika amin’ny web) roa ihany dia ampy. Fa angaha moa tsy Isiraely no namorona ny web cams? Ny ICQ? ny lakile USB?…Izay ihany – amin’ny fanajana manontolo na tsia – ho leon’ny fiandrasana anaty fitohanana, tara amin’ny asa, hiaritra ny anjomara maro manerana ny lalana isika rehetra “olona tsotra” eto Jerosalema manomboka ity alarobia ity ka hatramin’ny zoma. Indrisy, tena mihafy tanteraka isika noho ny anaran’ny fiadanana (fandriampahalemana).”
Nisy bala afomanga katyusha roa notifirina avy ao atsimon’i Libanona hadoboka ao Isiraely omaly, ka nahatonga an’i KGS ao amin’ny Tundra Tabloids hanamarika fa:
“Nahazo alalana avy amin’ny lehibeny any Iran ny Hezbollah hanatsoaka ny sabatra hampiadiana amin’izao fitsidihan’ny filoha Amerikana Bush any amin’ny faritra izao. Efa nampoizina ihany, indrindra hatramin’ny niheveran’i Iran fa tsy maintsy atao ny mandrahondrahona ho valin’ny fihaodihaodian’ny sambo mpiady Amerikana ao amin’ny Helidranon’ny Persika.”
Hoy izy manampy naheno ny hevitry ny mponina Isiraeliana:
As long as the Palestinians have yet to give up on their dream of ‘greater Palestine,’ the Israeli parliament and the people will be in no mood to give any kind of support to anything PM Ehud Olmert agrees to. There are no signs of anything good coming out of a Bush visit to both Israel and the PA… I would hope that if anything positive can be done during his visit, it's in the realm of convincing the Arabs in the region that the US will not allow for a nuclear Iran.”
“Arakaraky ny hampiatoan’ny Palestiniana ny nofinofy hahita an’i ‘Palestine lehibe’ no tsy isian’ny fihetseham-pon’ny vahoaka sy ny parlemanta Isiraeliana hanohana izay zavatra rehetra eken’ny praiminisitra Ehud Olmert. Tsy misy marika amantarana fa hitondra rivobaovao ho an’ny Isiraeliana sy ny Palestiniana ny fitsidihan’ny filoha Bush … Te-hanantena aho fa ny zavatra tsara azo amin’ny fitsidihana ataony dia eo amin’ny sehatra handresehan-dahatra ny Arabo fa tsy hamelan’i Etazonia an’i Iran hanana nokleary.”
Ampian’ny mpanoratra ny This Ongoing War fa ho fampitandremana ny fitsidihan’i Bush ireny baomba nalefa avy any Gaza hitifitra ny faritra atsimon’Isiraely iny:
“Tsy ho kisendrasendra mihitsy fa niara-nitontona androany maraina ny fiakaran’ny hafanana tany amin’ny faritra avaratra sy ny nitifirana an-tafondro ny sisintanintsika any amin’ny faritra atsimo. Ho avy eto an-tanàna i Bush ka efa tonga ny fampahalalam-baovao. Qassams 9 sy baomban-tafondro 2 farafahakeliny no nianjera tao amin’ny faritra andrefan’i Negev eto Isiraely androany maraina (alarobia) ora vitsivitsy monja mialoha ny hahatongavan’ny filoha Bush aoamin’ny seranam-piaramanidin’i Ben Gurion.”
Tafiditra ao anatin’ny valo andro itsidihan’ny Prezidà Bush mamakivaky ny faritra afovoany Atsinanana izao fitsidihana ao Isiraely izao. Ao anatin’ny fandaharam-potoanany ihany koa ny fitsidihana an’i Kuwait, Bahrain, Emirà Arabo mitambatra, Arabia Saodita, ary Ezypta ary natao izany hamehezana ny tahotra amin’ny angovo nokleary ananan’ Iran.